Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha nidaamka burburka dhagaxa ee Shiinaha GBM
Nidaamka kor u kaca jabiyaha dhagaxa lugaha
1) Haddii burburiyuhu uu ku dheggan yahay dhagax weyn, kor -u -qaadista lugta ayaa gacan ka geysan karta jebinta dhagaxa, si loo yareeyo waqtiga nadiifinta burburiyaha iyo sidoo kale xoogga shaqada ee shaqaalaha .;
2) kor u kaca cagaha ayaa ka dhigaya shaqada nadiifinta burburiyaha badbaado dheeraad ah;
3) kor u kaca lugta ayaa ka dhigi kara shaqada burburka mid sahlan oo jilicsan, kordhinta wax soo saarkaaga 5 ~ 20%;
GBM Nidaamka Burburka Joogtada ah ee Joogtada ah:
GBM waa soo saaraha hormuudka ka ah Nidaamka Burburiyaha Joogtada ah ee Shiinaha. Waxaan fahamsanahay in warshadaha macdanta iyo dhagaxa laga qoro waqtigu uu yahay lacag, halka ugu hooseysa ay tahay tan saacaddii. Nidaamyadeenna qulqulka dhagaxa ee jaban ee dhagaxa ah ayaa loo dhisay si adag si ay geedkaagu ugu dhex socdo codsiyada ugu adag. Goobta la xaqiijiyay oo macmiilku oggolaaday, waxaan haynaa xirmo kor u kaca jabiyaha dhagaxa si loo daboolo baahiyahaaga gaarka ah.
GBM waxay siisaa macaamilka nidaamyo fara badan oo kala jabay dhagaxa weyn kuwaas oo kor u qaadaya badbaadada, waxsoosaarka iyo macaashka codsiyada burburinta ee miinooyinka iyo dhagaxa adduunka oo dhan.
Nidaamyadeenna qulqulka dhagaxa ee jaban ee dhagaxa ah waxaa loogu talagalay in ay wax ruxaan, jebiyaan walxaha, yareeyaan waqtiga dhimista iyo in macaashkaagu uu ku socdo codsiyo adag oo dalbanaya. Kor u kaca jabiyaha dhagaxa ayaa ah habka ugu nabdoon ee lagu maareyn karo buundada, dhisidda iyo alaabta ka weyn.
Waxaan ku siin karnaa xirmooyinka xallinta xirmooyinka dhagaxa ee u gaarka ah shuruudaha goobtaada. Iyada oo qayb ka ah adeegga waxaan ku siinnaa sawirrada soo -jeedinta badeecadda, oo muujinaya tusaalaha ugu habboon ee boom baahidaada. Xidhmada nidaamka boom -jabiyaha oo dhammaystiran wuxuu ka kooban yahay buun -jabiyaha dhagaxa, baakada korontada, dubbe hawo -mareenka, kontaroolada hawl -wadeennada, taageeridda shaqada birta, rakibidda, hawlgelinta iyo tababarka hawlwadeenka.
Kooxda khibrada leh ee jabinta dhagaxa ee GBM. waxay bixin doontaa qiimeyn goobta u gaar ah iyo sawirrada soo jeedinta goobta si ay uga caawiso qorsheynta wanaagsan iyo xakamaynta kharashka. Waxaan hubin doonnaa in qalabkaaga loo meeleeyay nabadgelyada ugu habboon, isku halaynta iyo wax -soo -saarka.
Nadiifinta dhagaxa macdanta
Faa'iidooyinka kor u kaca jebinta dhagaxa lugta:
4) kor -u -kaca lugtu wuxuu qaadan karaa booska isla qodista korontada oo leh 1/6 oo keliya kharashka.
Hore: Hagaajin wiishka guuxa
Xiga: Suunka gudbiyaha xadhkaha birta oo aan jeexnayn
Maareeyaha walxaha Haydarooliga ee nooca taayir2
Xarigga xargaha xarigga mootada
Xadhig Xadhig Kaliya
Fidiyaha weelka Forklift
candhuufta telescopic wiishka boom, wiishka badda, wiishka sagxadda, wiishka Haydarooliga, Wiishka Dheelitirka, wiish kalluumeysi, Dhammaan Alaabta